Sun, Jul 22, 2018 | 04:54:40 NST
केही घण्टाको प्रसूति अनुभव
लक्ष्मण कार्की - एकहुल मानिस गुजुमुज्ज परेर एक ठाउँमा जम्मा भएका छन् । के पो रहेछ भनेर म घुस्रिँदै भिडभित्र पसें । ‘के के पो देख्नुपर्छ यार...’ पुर्वेली शैलीमा फत्फताउँदै एउटा केटो भिडबाट बाहिरियो । ट्याक्सीभित्रै बच्चा जन्मिएको रहेछ ।
नायक बन्नुपर्छ कांग्रेस
विजय पौडेल । नेपाली राजनीतिक परिदृश्यमा एउटा पाको दल । वि.सं. २००६ साल चैत २७ गते कलकत्तास्थित टाइगर सिनेमा हलमा नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस (बीपी समूह) र नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेसको संयुक्त सम्मेलनद्वारा राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवादको सिद्धान्तलाई अंगीकार गर्दै गठित नेपाली कांग्रेस पार्टी ।
युरोपमा मानव तस्करको फन्दामा नेपाली
सन्तोष न्यौपाने, बेल्जियम - अवैध बाटो हुँदै अमेरिका पुग्ने लोभमा धेरै नेपालीले मेक्सिको तथा ग्वाटेमालामा बन्दी जीवन बिताइरहेका छन् । केही चेलीहरु अफ्रिकामा नारकीय जीवन बिताउन बाध्य भैरहेका छन् । अफ्रिकाका विभिन्न विश्वविद्यालयमा अध्ययनका लागि पुगेका विद्यार्थीहरुले पनि सास्ती खेपिरहेका छन् ।
झिलिमिली रेष्टुराँमा खान नजान्दा
मिलन तिमिल्सिना - ‘कति कोठामा खाना बनाउनु, कहिलेकाहीँ त यसो रेष्टुरेन्टतिर पनि लैजाउ न बुढा’ कुकरले टिर्र.. सिटी लगाउन थाल्दा बेलाबेला जहान फतफताउने गर्छिन् । हो क्यारे जाउँ न जस्तो पनि लाग्छ ।
दिल खोलेर हासौँ
डा अरुणा उप्रेती – बालबालिकाहरू दिनको सयचोटि मुस्कुराउने गर्छन् । वयस्क भएपछि आफूलाई गम्भीर देखाउन हाँसो उठ्ने कुरामा पनि हामी मुस्कुराउँछौं मात्रै, त्यो पनि ओठ खोल्न गाह्रो मान्छौं । मरीमरी हाँस्ने, पेट मिचीमिची हाँस्ने, आँसु आउने गरी हाँस्ने भन्ने कुरा ठूला मानिसहरूले शायदै गर्छन् ।
राज्यबाट उपेक्षित ‘अट्वारी’
सन्तोष दहित - प्रकृतिसँग अत्यन्त नजिक सम्बन्ध रहेको थारु समुदाय संस्कृतिका धनी मानिन्छन् । त्यसैले होला थारु समुदायले हरेक महिना कुनै न कुनै पर्व मनाउँदै आएका छन । अट्वारी पर्व पनि थारु समुदायको एउटा महत्वपूर्ण पर्व हो ।
मिडिया गुफामा पस्दा
बोमलाल गिरी - काम सुन्दैमा अनौठो र चुनौतीपूर्ण पनि छ । तर यही चुनौतीको सामना गर्न देशभरबाट अलनाइल भोटिङका आधारमा ६ जना पत्रकार छनौट भएका थिए । गुफा पस्न छनोट हुनेमा मसहित, रविराज बराल, महावीर विश्वकर्मा, दुर्गा अधिकारी, कविता मगर र गोपाल झापालीको साथमा हुनुहुन्थ्यो, वरिष्ठ पत्रकार युवराज घिमिरे ।
भकुण्डो अँगेनामा ‘गोल’ भो !
मिलन तिमिल्सिना – उबेला घरमा मोजा लाउने बा मात्रै । स्कूलको कामले शहरतिर गैरहनुपर्ने भएकाले बाले कहिलेकाहीँ जुत्ताभित्र मोजा पनि लगाउने गर्नुहुन्थ्यो । कुर्कुच्चामा परेको प्वाल ठूलो भएर माथि देखिन थालेपछि बाले मोजा फेर्नुहुन्थ्यो ।
म पनि डिप्रेशनको शिकार थिएँ
डा. अरुणा उप्रेती – अरूको बारेमा लेख्न र तिनीहरूका समस्या समाधान भएका घटना लेख्न जति सजिलो हुन्छ आफ्नो बारेमा, त्यसमाथि पनि आफ्नो मानसिक समस्याको बारेमा लेख्न बडो गाह्रो हुनेरहेछ । मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञसँग उपचार गराएकी थिएँ भन्ने तथ्य स्वीकार्न मलाई झण्डै २१ वर्ष लाग्यो ।
सन्तोष दहित– थारु समुदायका महिलाहरुको महान पर्व भनेको कृष्णाअष्टमी अर्थात ‘अष्टिम्की’ हो । यो दिन उनीहरुको स्वतन्त्रताको दिन पनि हो । किनकी अरु दिन घरको काममा व्यस्त हुने थारु समुदायका महिलाहरुलाई यो दिन चाहिँ पुरुषले सघाउँछन् ।
व्यंग्य : वैद्य बालाई श्रीपुष्पको पत्र
मिलन तिमिल्सिना – प्रिय काम्रेड, हम्मरभन्दा दरिलो र हँसिया भन्दा धारिलो सम्झना । तपाईंलाई कस्तो छ कुन्नि ? मलाई त माने ठीकै छ, नमाने उही व्यथा । सीतालाई चुरा, प्रकाशलाई छुरा, कांग्रेस–एमालेका कुरा, न चुनाव पूरा, न वाइसिएल भए सुरा ।
कमलरी आन्दोलनले कसरी पायो सफलता ?
सन्तोष दहित - २०६९ चैत १४ गतेका दिन १२ वर्षीया कमलरी सृजना चौधरीको ज्यान गएको खबर सार्वजनिक भएलगत्तै कमलरीदेखि मानवअधिकार, महिला अधिकार क्षेत्रमा काम गर्ने संघसस्थाको ध्यानाकर्षण भयो ।
उज्यालो यात्रामा १३ वर्ष ...
मिलन तिमिल्सिना, २०५४/०५५ सालतिर आइएडको जाँच दिएर घरमै बसेको समय थियो । त्यतिबेला रेडियो नेपालबाट बज्ने प्रायः सबै कार्यक्रम निकै ध्यान दिएर सुन्थे । बेलुकी खाना खाने बेला बज्ने एउटा कार्यक्रमले मोहनी नै लगायो ।
अभावको बेला नुन बाँड्नुहुन्थ्यो मरिचमान
कालिकाप्रसाद उपाध्याय - २०४६ साल पुस १४ गते त्यतिबेलाका राजा वीरेन्द्रको जन्मोत्सवको दिन मैले चूरे माद्यामिक विद्यालय बगनाहामा कविता वाचन गर्दा त्यति बेलाका केही भूमिगत व्यक्तिहरुले उचालेर मलाई पञ्चायत विरोधी वक्तव्य दिन उकासे ।
मरिचमान र गणतान्त्रिक संस्कार
दीपेन्द्र कुँवर– मरिचमान सिंहको नाम मैले केटाकेटीमै रेडियो नेपालबाट सुनेको, मिति चाहिँ याद भएन । समाचारमा मरिचमानको नाम प्रधानमन्त्रीका रुपमा आउँथ्यो । रेडियो नेपालले भन्थ्यो–प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंह... ।’ ठूला मान्छेको नाम मात्रै रेडियोमा आउँछ भन्ने केटाकेटी बुझाई थियो ।
यूवा सहभागिता र विकास
शिखा शर्मा - संयुक्त राष्ट्र संघले हरेक वर्ष अगस्ट १२ मा अन्तर्राष्ट्रिय यूवा दिवस मनाउँछ । हरेक वर्षका लागि एउटा नारा तोक्छ । यस वर्षको यूवा दिवसका लागि ‘युथ माइगे्रशनः मुभिङ्ग डेभेलोप्मेन्ट फर्वाड’ भन्ने नारा तोकिएको छ ।
अल्छी पुरुषको भान्सा अनुभव
मिलन तिमिल्सिना - स्कूल पढाउने जहानसित म सधैं फूर्ति गर्थें–तिमी त्यही स्कूल ओहोरदोहोर गर्ने त हो, म त विहानदेखि बेलुकासम्म जागिर खाँदाखाँदा हैरान छु । उनले भन्दा तेब्बर बेसी काम गर्छु भन्ने मलाई लाग्थ्यो । तर दुई दिन भान्साको ‘लुतेधन्दा’ गर्दा थाहा भयो, मैले भन्दा जहानले कति हो कति बढी काम गर्ने रहिछिन् ।
सर्प पनि सत्ता उन्मादले फाँफाँ र फुँफुँ !
अहिले गर्मी र वर्षाको सिजन । खेतबारी, पाखापखेरा, बाटोघाटो र खोलानालामा सर्प भेटिन्छन् । कुनै सर्प विषालु हुन्छन्, कुनै हुँदैनन् । कुनैले देख्ने बित्तिकै मान्छेलाई आक्रमण गर्छन्, कुनैले केही गर्दैनन् । सर्प हानिकारक पनि हो, उपयोगी पनि । आइतबार नागपञ्चमी भएकाले अहिले झन् नाग अर्थात सर्पको सम्झना गर्ने बेला हो ।
अत्तालिँदै भूतले भने–नाइटुपाध्यको दुहाई...
मिलन तिमिल्सिना - चरिमारेटार स्कूल पढ्न जाँदा साथीहरुले भन्थे–डम्बरे चौतारो र ऋषिपानी खोलामा भूतले तर्साउँछ । साथीहरुको कुरा सुन्दा डर लागेपनि तर्साउने भूत कस्तो हुन्छ होला भन्ने सधैं खुल्दुली लाग्थ्यो । तर जिन्दगीमा अहिलेसम्म भूत देख्न पाएको छैन ।
सामाजिक सञ्जालमा अनलाइन पत्रकारिताको बहस
काठमाडौं, साउन २३ - नेपालमा अनलाइन मिडियाको संख्या बढेसँगै यसलाई ब्यवस्थित गर्नुपर्ने आवाज पनि उठ्न थालेको छ । अनलाइन सञ्चार माध्यमको पहिचान, यसको विश्वसनीयता र उत्तरदायित्वको विषयमा पछिल्लो समयमा बहस हुन थालेको छ ।
गोरखनाथलाई रोट चढाउन जाँदा
विनोद ढकाल – गोरखाको गोरखकाली मन्दिर क्षेत्रमा एउटा सानो साँघुरो र अध्याँरो गुफा छ, गोरखनाथ गुफा । गुफा सानो र साँघुरो भएपनि मन्दिरमा पुग्ने मानिसहरु गुफामा छिरेर पूजा नगरी फर्किंदैनन् । अझ साउन महिनामा त यहाँ जानेहरु अझै धेरै हुन्छन् ।
मंसिर चार, कहाँसम्म सार !
मिलन तिमिल्सिना - मंसिर ४– खलाको धान भकारीमा सार । मंसिर ४–हिउँ पर्न थालेपछि हिमाली भेगका मान्छे बेंसीतिर सर । मंसिर ४–वैद्य बाको सधैंभरी छेकबार । मंसिर ४–चुरीफुरी गर्ने दल मात्र चार । मंसिर ४–रेग्मीबाको हार । मंसिर ४–फेरि चुनाव सार !
कुँडेमा दूध नभएपनि पेटभरी खिर
मिलन तिमिल्सिना – माथ्लो पाटामा दोहोरो मकै गोडिसकेपछि हामी मकैले कहिले चमरा काढ्छ भनेर पर्खन्थ्यौं । बिहान उठ्ने बित्तिकै बार्दलीबाट बारीमा हेर्थ्यौं । हाम्रा बारीमा पनि उस्तै, खोलापारीको पाखोबारीमा पनि उस्तै ! सप्रेका मकैको बोटले डाँडा पुरै हरियो भएको छ, तर चमरा चाहिँ निस्कन भ्याएको छैन ।
नरबहादुलाई मन पराउने नर्सहरु
बोमलाल गिरी - ठ्याक्कै तीन महिना अघि अर्थात २०७० बैशाख ९ गतेको दिन । सन्दर्भ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना दिवस । त्यही अवसरमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको संस्थापक मध्येका एकमात्र जीवित नेता नरबहादुर कर्माचार्यलाई भेट्न म उहाँको निवास ललितपुरको बालकुमारी पुगे ।
पुलसँग जोडिएको मेरो सपना
विनोद ढकाल - हामी स्कुलबाट फर्किदा सधैं बाले बाटो खनेको ठाउँमा जान्थ्यौं । बाको समूहमा काम गर्नेमा गाउँकै दाई, काकाहरु थिए । उनीहरु ठेलागाडामा चाङ लगाई लगाई ढुंगा ल्याउँथे रोडको छेउमा पर्खाल लाउन । ढुंगा लिन रित्तो ठेलागाडा लिएर खोलातिर जाँदा खोलाको छेउसम्म हामीलाई गुडाइदिन्थे ।
खाडीको रमजानमा हामी नेपाली
उमाकान्त पाण्डे, मुस्लिम समुदायको पवित्र पर्व रमजान मध्यपूर्वका मुस्लिम देशहरुमा बुधवारदेखि शुरु भएको छ । साउदी अरेरिबया, संयुक्त अरब इरिरेट्स यूएई, इजिप्ट, कुबेत, कतार लगायतका देशहरूमा यो पर्व भब्यताका साथ मनाइन्छ ।
राजनीति गर्न मन लागे बेल्जियम आउनु
सन्तोष न्यौपाने – ‘न्याय नपाए गोर्खा जानु, राजनीति गर्न मन लागे बेल्जियम आउनु ।’ बेल्जियममा बस्दै आएका नेपालीहरुबीच चर्चित बनेको यो व्यङ्ग्यातम भनाईले यहाँ रहेका सामाजिक संस्थाको वास्तविकतालाई छर्लङ पार्छ ।
निजी क्षेत्रमा अराजकताले बढाएको ‘आत्मविश्वास’
कमल पराजुली/उज्यालो, काठमाडौ – भर्खरै सार्वजनिक भएको निजी क्षेत्रको संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्ययनले ब्यवसायिक आत्मविश्वास सूचक बिसिआई ३७ बाट बढेर ४९ अंक पुगेको देखायो । केही दिन अघि सरकारले सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले पनि ब्यवसायीहरुमा आत्मविश्वास बढेको देखाएको थियो ।
दार्चुला – मनसुनको सुरुमै महाकालीमा आएको बाढीले दार्चुला सदरमुकाम खलङ्गाका वासिन्दालाई ठूलै पीडा दियो । बाढी अहिले घटिसकेको छ तर बाढी प्रभावितको पीडा उस्तै छ । सँगसँगै दार्चुलामा मात्रै नभई धेरै नेपालीहरुमा महाकालीमा बाढी किन र कसरी आयो भन्ने जिज्ञासा उठेको छ ।
अरु रोपाइँमा गएर मलाई गोठालो पठाउँथे
मिलन तिमिल्सना – बिहान उठ्ने बित्तिकै हजुरबा कोदाली काँधमा राखेर खेत झर्नुहुन्थ्यो । हिलैहिलो भएको जीउ लिएर भात खान एकछिन घर आउनुहुन्थ्यो, अनि फेरि खेतमै जानुहुन्थ्यो । बेलुकी फर्केर कोदाली गोठको पालीमा सिउरिनुहुन्थ्यो र खुईय.... सुस्केरा हालेर खाटमा बस्नुहुन्थ्यो ।
बाढी पीडितलाई एनआरएनको उधारो सहयोग
सन्तोष न्यौपाने/उज्यालो । बेल्जियम – असारको सुरुमा आएको अविरल वर्षापछिको बाढीले सुदुर तथा मध्यपश्चिमका जिल्ला प्रभावित भए । सुदरपश्चिमको दार्चुला जिल्लाको सदरमुकामा खलङ्गाको अधिकांश सरकारी कार्यालय र निजी घरसमेत महाकालीको बाढीमा बगे । अहिले बाढी पीडितका लागि भनेर देश विदेशमा चन्दा संकलन हुन थालेको छ ।
महाकालीको कहर र खल्बलिएको मेरो दैनिकी
शंकर धामी/उज्यालो । दार्चुला – असार २ गते दिउँसो साथीहरुले महाकालीमा धेरै पानी छ, पुल नै बगाउँछ कि ? भनिरहेका थिए । असार १ गते रातीदेखि परेको पानीले महाकालीको सतह बढाएको होला भन्ने सम्झें । तर मन मानेन बेलुका खलंगाको बीरेन्द्रवन क्षेत्र र घाटबजार क्षेत्रमा पुगें र महाकालीको अवलोकन गरें ।
मिलन तिमिल्सिना – यस वर्षको एसएलसीमा २ लाख ६० हजार ५ सय ६० विद्यार्थी सहभागी हुँदैछन् भनेर रेडियोले भन्दा मनमनै कल्पिँदै थिएँ ‘म नभएको भए ५९ हुन्थ्यो । ओहो म कति ठूलो भैसकेछु । मलाई समेत गनेर रेडियोले समाचार भन्न थालिसक्यो । हेर्दाहेर्दै एसएलसी दिने भैसकें ।’ सम्झँदै नाक ठूलो भयो ।
“जहाज पनि पो जोल्टिङमा पर्दो रैछ !”
कृष्ण गुरागाईं – लामो हवाई यात्रामा साथीभाई सँगै आकाशे गफ गर्दाको मज्जा बेग्लै हुन्छ । तर यो यात्रामा एक्लै छु । त्यसैले मलाई सँगैको सिटमा कोही नेपाली नै परि दिए हुन्थ्यो भन्ने लागेको थियो । नभन्दै यसपाली त्यस्तै भयो । क्यापदेखि सर्ट, पाईन्ट, जुत्तासमेत नयाँ र टिलक्क टल्कने लगाएर मलेशिया हिडेका एक युवा परे सँगैको सिटमा ।
लाप्राकमा एक रात (फोटो फिचर)
बोमलाल गिरी - लाप्राक भन्ने बित्तिकै झट्ट दिमागमा आउँछन्ः लहरै घर, गुरुङ जातिको मात्र बस्ती र मिलेको समाज । लागिगुराँसले बन ढकमक्क छ । माथि सुन्दर बौद्ध हिमाल हाँसेको छ । त्यही हिमालबाट तल बग्ने जेर्बो खोलाले पिरती गाँसेको छ । तर प्राकृतिक रुपमा यति सुन्दर देखिने लाप्राक गाउँ त्यसैको जोखिमबाट पीडित छ ।
कृष्ण गुरागाईं - कहि मध्यरात भएको छ, कहि दिउँसै छ । विश्व क्रिकेट लिग डिभिजन ३ अन्तर्गत समूह चरणको अन्तिम खेलमा अमेरिका र आयोजक बर्मुडा खेल्दै छन । अमेरिकाले हार्दा नेपालको भाग्य खुल्नेवाला छ । बर्मुडाले कति ओभरभित्र अमेरिकालाई हरायो भने नेपाल अघि बढ्छ भनेर तयार पारेका समिकरण फेसबुक र ट्वीटरमा छ्याप्पछ्याप्ती शेयर भईरहेका छन् ।
बोमलाल गिरी - कुनै बेला आफ्नो पुर्ख्यौली सम्पत्ति पनि पार्टीको नाममा दिने एमाओवादीका धेरै नेताको ध्यान धन कमाउनेतिर गइरहेको बुझ्न गाह्रो छैन । नेतादेखि कार्यकर्ता सम्म पार्टी काममा भन्दा धन कमाउन सकृय रहेको एमाओवादीका गाउँ स्तरीयदेखि केन्द्र सम्मका कमिटिहरुमा सुन्न पाइन्छ ।
गोपाल गुरागाई -चिल्लो पारेर कोरेको कपाल र क्रिज मिलेको सुटमा चिटिक्क परेर निस्कदा पनि आजकाल एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको अनुहारमा कुनै चमक र रौनक देखिदैन । सार्वजनिक समारोहमा धेरै समयसम्म उन्को मुण्टो लर्किएको र अनुहार फुंग उडेको देखिन्छ । कहिले उनी औधि बिनयशील मुद्रामा प्रतिपक्षी समकक्षीलाई फकाएर बोल्छन् र कहिले अति क्रोधमा तल्लो स्तरका गालीगलौज गर्छन् ।
अकाल मृत्युको कारण
गोपाल गुरागाईं - संविधान सभाको सचिवालयमा नयाँ सविधानको मस्यौदा तयार थियो, त्यसमा केही शब्द मात्र खालि थिए, जुन सहमति भएपछि भर्ने तयारी थियो । राष्ट्रपति भवनमा नयाँ संविधान घोषणामा उपस्थित हुने निम्तो बाड्ने कार्ड तयार थिए, तिनमा संविधान घोषणाको समय र निम्तालुको नाम मात्र लेख्न बाँकी थियो ।
कालिमाटीमा मैंले जे देखें
विनोद चौलागाईं/उज्यालो । काठमाडौं, फागुन २१ - कालिमाटी तरकारी तथा फलफुल विकास समितिको बजारमा आगो लागेको खबर पाएपछि विहान छ बजेअघि नै म कालिमाटी पुगेको थिए । म कालिमाटीमा पुग्दा बजार प्रबेश गर्ने मुख्य गेटमै थुपै्र प्रहरी तैनाथ थिए । सञ्चारकर्मी र समितिका सदस्यबाहेक अरुलाई भित्र पस्न दिईएको थिएन । बाहिरबाट तरकारी लिएर आएका गाडी गेट बाहिरै रोकिएका थिए भने तरकारी किन्न कालिमाटी पुगेकाहरु पनि गेट बाहिरै थिए । आगोले प्लाष्टिक डढेको गन्ध गेट बाहिरसम्मै आइरहेको थियो । तरकारी बजारको मुख्य गेटबाट भित्र ...